Qarax xoogan oo ka shacay magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaQarax xoogan oo ka shacay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, laba Qarax oo xooggan ayaa goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Labadq Qaraxa ayaa inta badan waxaa laga maqlayay guud ahaan Magaalada Muqdisho, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in uu yahay mid loo adeegsaday gaari.
Qaraxa ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in uu ka dhacay Agagaarka Hay’adda CID-da oo ku taalla Lambar 4 ee magaalada Muqdisho lama oga qasaaraha ka dhashay.
La soco wararka ku saabsan Qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dulimaadka Soomaaliya iyo Itoobiya oo dib u bilaawday